Nihoatra noho ny lalana nentim-paharazana sy avo lenta ny nomerika sy mivantana nandritra ny areti-mifindra
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Nihoatra noho ny lalana nentim-paharazana sy avo lenta ny nomerika sy mivantana nandritra ny areti-mifindra
Ity dia fomba fijery mahavariana momba ny fahombiazan'ny teknolojia - amin'ny heviny midadasika indrindra - nandritra ny haavon'ny valan'aretina.
Ny teknolojia nomerika dia nanompo ny indostria tamin'ny fomba mahomby kokoa noho ny safidy nentim-paharazana nandritra ny areti-mifindra Covid-19, hoy ny fikarohana navoaka androany (Alatsinainy 1 Novambra) nataon'i WTM London sy Travel Forward.
Efa ho 700 eo ho eo ireo tompon'andraikitra ambony eran'izao tontolo izao no nandray anjara tamin'ny tatitra momba ny indostrian'ny WTM ary nasaina nandamina ny fahombiazan'ny teknolojia sy fantsona isan-karazany. Efa ho ny antsasaky ny santionany (47%) no nilaza fa ny fantsom-barotra nomerika toy ny fanatsarana ny milina fikarohana, ny fikarohana karama ary ny varotra mailaka dia tena nahomby nandritra ny areti-mifindra, ary ny 30% hafa dia mamaritra azy ireo ho tena mahomby. Ny 6% ihany no nilaza fa tsy mahomby izy ireo.
Mifanohitra amin'izany kosa, ny 25%-n'ny mpanatanteraka ihany no nilaza fa ireo mpiasan'ny fitsangatsanganana an-dalambe dia tena nahomby tamin'ny fanohanana ny orinasany nandritra ny krizy, ary kely kokoa (31%) no nilaza fa nahomby izy ireo. Betsaka ny vitsy an'isa (16%) no nilaza fa tsy mahomby ny mpiasan'ny lalambe.
Amin'ny ankapobeny, ny fantsona mivantana mankany amin'ny mpanjifa dia nanao be indrindra nandritra ny areti-mifindra. Ny tranokalan'ny marika, ny fampiharana ary ny foibem-pifandraisana dia nofaritan'ny 70% mahery amin'ny santionany ho tena mahomby na mahomby, miaraka amin'ny isa manilika azy ireo ho tsy mahomby dia ao anatin'ny isan-jato tokana.
Mifanohitra amin'izany kosa, ny haino aman-jery nentim-paharazana toy ny pirinty, ny fahitalavitra ary ny mailaka mivantana dia tena nahomby na tena nahomby tamin'ny latsaky ny 50%, saingy ny isan-jato somary avo - 17% - dia nanala ireo fantsona ireo ho tsy mahomby.
Any amin'ny toerana hafa, nanontaniana manokana momba ny fironana teknolojia roa talohan'ny vanim-potoanan'ny Covid. Ny rahona dia nahomby tamin'ny antsasaky ny santionany (52%), na dia ho liana aza ny mpivarotra rahona sy ny mpitantana kaonty hahafantatra ny antony niheveran'ny iray amin'ny folo fa tsy nahomby ilay rahona. Toy izany koa, ny APIs - rindrambaiko izay ahafahan'ny rafitra roa hifanerasera - dia nahomby tamin'ny antsasaky ny santionany saingy mbola tsy nahomby tamin'ny 8%.
Na izany aza, ny sokajy mahantra indrindra dia ny fandriana fandriana sy ny aggregators, ary latsaky ny antsasany (48%) no nilaza fa nanohana ireo orinasa ireo nandritra ny areti-mifindra, ny naoty fankatoavana ambany indrindra amin'ny lisitra. Averina indray, vitsy an'isa manan-danja - 13% - nandroaka azy ireo ho tsy mahomby.
Mifanohitra amin'izany, ny fampiasana teknolojia tsara indrindra dia ny fifandraisana, miaraka amin'ny mpiasa sy ny mpanjifa. Maherin'ny 80%-n'ny santionany no nilaza fa mahomby amin'ny fampiasana anatiny ireo fitaovana ireo, ka ny 4% ihany no milaza fa tsy ampy ireo fitaovana ireo. Ny fampiasana ny teknolojia hiresahana amin'ny mpanjifa ivelany dia niasa tsara nandritra ny efa ho telo amin'ny efatra (74%), ary 6% ihany no tsy afa-po.
Simon Press, talen'ny fampirantiana, WTM London sy Travel Forward, dia nilaza; "Ity dia fomba fijery mahavariana momba ny fahombiazan'ny teknolojia - amin'ny heviny midadasika indrindra - nandritra ny haavon'ny valan'aretina. Mampiseho izany fa ny tontolon'ny teknolojia dia mbola mizarazara miaraka amin'ny teknolojia sy/na fantsona sasany tsy mbola mifanaraka amin'ny tanjona ary tsy ampy amin'ny zavatra ilaina, fa ny hafa kosa toa nipoitra nahazo fankatoavana iraisam-pirenena.
"Ny WTM London sy ny rahavaviny mifantoka amin'ny teknolojia dia mampiseho ny Travel Forward mba hanampiana ireo orinasam-pivezivezy hamantatra ny karazana teknolojia ilainy ary iza no hiara-miasa amin'ny fananganana indray ny dia."